Top 20 Best YouTube ka MP3 Ntụgharị (Ma na desktọọpụ na Online)
> Resource> tọghata> The Best YouTube ka MP3 converters-atụ aro
The Best YouTube ka MP3 converters-atụ aro
Ya mere ọtụtụ ndị dị ka iji tọghata YouTube videos ka MP3, otú ha nwere ike na-enwe oké music on MP3-dakọtara ngwaọrụ dị ka PC, Mac, iPod, PSP, Zune, Zen, na na. Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ YouTube ka MP3 Ntụgharị maka ọrụ, na desktọọpụ dabeere na web-dabeere n'anya. Anyị nwere họrọ 20 converters maka gị. Ka ịhụ nkọwa n'okpuru.
# 1. The Best YouTube ka MP3 Ntụgharị
1. Download YouTube MP3 faịlụ ozugbo
2. Otu click ibudata niile vidiyo na YouTube ọwa na listi ọkpụkpọ
3. akwado nchọgharị: ntụgharị, Firefox na Chrome
4. Task scheduler, video ọkpụkpọ na njikwa
Olee otú iji Wondershare AllMyTube ibudata YouTube MP3 ozugbo
Kwadebe ọrụ: download na wụnye Wondershare AllMyTube na PC gị na ma ọ bụ Mac. Ka anyị hụ a zuru ezu nkuzi n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Chọta ọkacha mmasị gị YouTube videos
Tinye website nke YouTube na ịnyagharịa ọkacha mmasị gị videos. Rịba ama na ị kwesịrị ị na-egwu videos na otu nke na-esonụ nchọgharị iji maka videos na-ahụrụ site usoro ihe omume. The nchọgharị ndị ntụgharị, Firefox na Chrome.
Nzọụkwụ 2. Download YouTube MP3 faịlụ ozugbo
Pịa Download button na ga-egosi na n'elu aka nri nke ihuenyo vidiyo na họrọ naanị Audio si dobe ala menu. Mgbe ahụ, mgbe ụfọdụ nkeji, ị nwere ike nweta ihe na MP3 faịlụ na kọmputa gị.
Alternatively, ị pụrụ iṅomi URL nke YouTube video na pịa ala akụ nso Paste URL bọtịnụ na usoro. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ a nhọrọ nke YouTube MP3. Pịa ya na ị nwere ike nweta
# 2. YouTube-MP3.org
YouTube-mp3.org bụ ihe online ọrụ maka converting YouTube vidiyo na mp3. Niile ị chọrọ bụ idetuo url nke YouTube videos na mado n'ime oghere igbe dị na website. Pịa tọghata Video ka website amalite iji nyochaa URL na tọghata ya MP3. Mgbe okokụre, a Download button bụ maka na ị ibudata MP3 faịlụ gị obodo nchekwa. Ọ na-akwado Mac, Windows na kwa Linux.
Gaa YouTube-MP3.org >>
# 3. MakeItMP3.com
MakeItMP3.com-enye gị ohere iji tọghata vidiyo si na YouTube, Yahoo, Google na faịlụ MP3. Ihe dị gị mkpa ime bụ mado URL nke video ka ide igbe dị na website wee pịa tọghata. I nwekwara ike họrọ àgwà ụdị na ị chọrọ MP3 faịlụ na-adị. Ma buru n'obi na ọ bụrụ na audio àgwà nke video bụ ogbenye, ị na-ahọrọ a elu mma akakabarede ga agaghị eme ka ọ ada ọ bụla mma. Mgbe akakabarede dị n'elu, ị na mkpa ịbanye gị e-mail adreesị iji nweta a njikọ maka nbudata na MP3 faịlụ.
Gaa MakeItMP3.com >>
Ka mbụ tụnyere n'elu ngwá ọrụ atọ na i nwekwara ike Lelee ọzọ YouTube ka MP3 converters mgbe ahụ.
Tụlee 3 kasị mma YouTube ka MP3 converters
Download YouTube MP3 faịlụ ozugbo
Tọghata YouTube videos ka MP3
Download vidiyo si na 100+ saịtị MP3
Ezi audio àgwà
Otu click ibudata dum YouTube listi ọkpụkpọ na ọwa
Na-ma video na ọdịyo faịlụ
-Arụ ọrụ na 'Big 3' nchọgharị: ntụgharị, Firefox na Chrome
Fast akakabarede ọsọ
Ịtọ oge iji tọghata
Tọghata vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ na formats na ngwaọrụ
1. ọzọ ọrụ
2. anụ arụmọrụ
3. nzi oru nkwado
4. mgbe nile mmelite
1. Ọ dịghị mkpa ka wụnye
1. bụghị free
2. dịghị mgbe nile mmelite
Na-etolite na n'elu tebụl, ị pụrụ ịhụ na Wondershare AllMyTube bụ a keukwu ngwá ọrụ na-abụghị nanị na-akwado converting YouTube videos elu-àgwà MP3 faịlụ kamakwa Downloads YouTube MP3 faịlụ ozugbo. Ihe bụ ihe ọzọ, a usoro-enye gị ohere ịtọọ oge iji tọghata. Mgbe ụfọdụ isi ntọala, ị nwere ike ịhapụ ihe omume na-arụ ọrụ na ndabere. Ozugbo nbudata ọrụ na-okokụre, nke a omume nwere ike akpaaka mechie onwe ya ma ọ bụ gị na kọmputa dị ka gị mmasị.
# 4. ConvertMeMp3.com
ConvertMeMp3.com bụ a website enye YouTube video ka MP3 converting ọrụ. Mgbe na-abanye ya website, ị nwere ike ngwa ngwa na-Olee otú iji tọghata YouTube ka MP3. Ị naanị mkpa Tinye URL gị YouTube video ma họrọ ọdịyo mma. See Mepụta MP3 File bọtịnụ iji malite usoro. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, nke na-adabere faịlụ size, ị nwere ike nweta MP3 faịlụ anya.
Gaa ConvertMeMp3.com >>
# 5. Dirpy.com
Dirpy.com bụ a ihe mgbagwoju anya online YouTube ka MP3 Ntụgharị. Ọ n'ezie Dekọọ YouTube videos na faịlụ MP3. Ke ndidụk a YouTube video url na website, ị ga na-dugara a na peeji nke na ihe nhọrọ dị ka mwube ndekọ oge na edezi na mkpado. Rịba ama na ị kwesịrị ị na pịa Record button na-MP3 faịlụ, ma ọ bụ ọzọ, i nwere ike inwe virus omume imebi kọmputa gị site na ịpị ọzọ buttons.
Gaa Dirpy.com inwe a na-agbalị >>
# 6. VidtoMP3.com
VidtoMP3.com-enye gị ohere iji tọghata video URL MP3 faịlụ na ya website. E wezụga YouTube, ọ na-akwado ndị ọzọ na saịtị gụnyere MegaVideo, Dailymotion, Metacafe, Veoh, Myspace na ọtụtụ ndị ọzọ. Ị naanị mkpa Tapawa video url ka website na pịa Download na-amalite converting.
Gaa VidtoMP3.com inwe a na-agbalị >>
# 7. ListenToYouTube.com
ListenToYouTube.com bụ ihe ọzọ na online ọrụ maka converting YouTube na faịlụ MP3. Ọ bụ ngwa ngwa, free, na-achọ ọ Debanye aha. Tinye ulr nke ọ bụla YouTube peeji ke ufa igbe na pịa Go. Mgbe ahụ, a website ga-amalite iji weghachite na flash video faịlụ ma wepụ ọdịyo faịlụ ibudata dị ka MP3.
Gaa ListenToYouTube.com inwe a na-agbalị >>
# 8. Video2MP3
Video2MP3, dị ka ihe online ọrụ, atọghata vidiyo si na YouTube na faịlụ MP3 na easist ụzọ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ Tinye URL na igbe na pịa tọghata bọtịnụ. Chere maka ụfọdụ nkeji na-MP3 ebudatara gị na kọmputa. Ọ bụ naanị na mfe.
# 9. Vixy Freecorder
Vixy Freecorder bụ a desktọọpụ omume na-enyere gị ibudata videos na tọghata videos na faịlụ MP3. Ọ na-akwado nnọọ ọtụtụ nke video saịtị dị ka YouTube, Vimeo. Na ọ pụkwara ime ihe dị ka ihuenyo video-edekọ ihe.
Nye Vixy Freecorder a na-agbalị >>
# 10. flvto.com
flvto.com na-enye gị ihe n'ụzọ dị mfe iji tọghata online videos ka MP3. Ọ na-arụ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ usoro gụnyere Windows, Mac na Linux. Ị nwere ike Tapawa YouTube video URL igbe ma họrọ iji tọghata MP3. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị nwere ike nweta ọdịyo faịlụ gị na kọmputa.
Gaa flvto.com inwe a na-agbalị >>
# 11. Ytconv.net
Ytconv.net bụ ihe online YouTube ka MP3 Ntụgharị na-enye ọtụtụ adaba n'ụzọ rụchaa gị ọrụ. Tinye video URL igbe ma họrọ MP3. I nwekwara ike họrọ ọzọ formats dị ka FLV, 3GP. Ke akpatre, pịa tọghata na-esi gị faịlụ.
Gaa Ytconv.net inwe a na-agbalị >>
# 12. MediaHuman YouTube ka MP3
MediaHuman YouTube ka MP3 bụ a desktọọpụ omume, nke-enye gị ohere na-ege ntị YouTube ma ọ bụ Vimeo music offline. Ọ na-akwado Windows, Mac na Linux. Na ya ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface, adịghị anya ị ga-esi otú iji ya ozugbo awụnyere na ẹkedori ya na kọmputa gị.
Ịnwale MediaHuman YouTube ka MP3 >>
# 13 AudioThief
AudioThief downloads na-atọghata niile YouTube videos. Ị nwere ike idetuo na mado video URL igbe na-enweta MP3 faịlụ. Ọ na-enye gị ikike dezie mkpado ọmụma nke MP3 faịlụ.
Gaa AudioThief inwe a na-agbalị >>
# 14. YouTube ka MP3
YouTube ka MP3 bụ a Firefox Adon na Imea ahụ bụ nanị na ọdabara ka Firefox nchọgharị. Ọ bụ n'ezie ihe Adon na Imea nyere site Video3mp3.net. Mgbe ị na-elele video, gị na mkpa iji pịa na njikọ iji tọghata mp3.
Wụnye YouTube ka MP3 >>
# 15. Yt ka MP3
Yt ka MP3 bụ a free online Ntụgharị na-enyere gị na-ege ntị YouTube music na gị iPod, iPhone na ndị ọzọ na media egwuregwu. Na-aga ya website ka Tapawa video URL igbe wee pịa tọghata. Mgbe ahụ, ị nwere ike nweta ọdịyo faịlụ anya.
Gaa Yt ka MP3 inwe a na-agbalị >>
# 16. YouTube ka MP3 Free Ntụgharị
YouTube ka MP3 Free Ntụgharị ọzọ bụ ihe Adon na Imea na-arụ ọrụ nanị na Firfox. Ọ inserts a download bọtịnụ na video peeji na mgbe ị na-egwu video, ị nwere ike pịa bọtịnụ na-MP3 faịlụ.
Wụnye YouTube ka MP3 Free Ntụgharị >>
# 17. Youtube Iji MP3 PRO
Youtube Iji MP3 PRO bụ ihe ọzọ na Firefox Adon na Imea na tọghata ọ bụla Youtube ka MP3 ozugbo. Ọ ga-tinye a download button na peeji mgbe ị na-egwu a video on Firefox.
Wụnye YouTube ka MP3 PRO >>
# 18. ClipConverter.cc
ClipConverter.cc bụ ihe online media Ntụgharị na enye gị ohere download videos nakwa tọghata MP3 na ndị ọzọ na formats. Mgbe ị Tapawa URL igbe na pịa Gaa n'ihu, mkpa ka ị họrọ a usoro dị MP3. Ke akpatre, pịa Malite iji tọghata video ka MP3.
Gaa ClipConverter.cc inwe a na-agbalị >>
# 19. MP3Fiber
MP3Fiber-enye gị ohere tọghata ọ bụla YouTube URL MP3 na ọ na-enyere gị aka họrọ àgwà nke ọdịyo ị chọrọ. Tapawa URL igbe na ọ na-enye nhọrọ nke ọdịyo na video formats. Họrọ onye ị chọrọ na-amalite tọghata video.
Gaa MP3Fiber inwe a na-agbalị >>
# 20. music-clips.net
music-clips.net na-enye ohere iji tọghata YouTube videos ọtụtụ formats dị ka MP3, AAC, MP4 na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ kpam kpam free na mfe iji. Ị naanị mkpa mado URL ka website na pịa tọghata na-video.
Gaa music-clips.net inwe a na-agbalị >>
YouTube ka MP3
Jidere YouTube Audio
Download YouTube Ndetuta egwu ọkpụkpọ
MP3 Roket Alternative
YouTube teepu Mac
YouTube ka CD
YouTube ka iPadmini
Olee Otú M Pụrụ Easily na-akpaghị aka Tinye Metadata na iTunes
Olee otú Easily Tinye sere iPod
Gịnị mere My breeki aka Ntụgharị-adịghị arụ ọrụ?